Knowledge Archives - SonSon LinLin
February 9, 2022 sonsonlinlin 0
အတိုအပြတ်တွေ ဝတ်တဲ့အခါ လှပတဲ့ ခြေထောက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်စေဖို့ နည်းလမ်းကောင်း အတိုအပြတ်လေးတွေ ဝတ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိနေဖို့အတွက် ခြေထောက်လေးတွေ ဖြူဖွေးလှပနေစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ပျိုမေတို့အတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ လှပတဲ့ ခြေထောက်လေးတွေက သင့်ကို ပိုဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လှပနေစေမှာပါနော်။ (1) ကြေးချွတ်ပါ မျက်နှာတွေ၊ လက်တွေကိုလောက်ပဲ ဂရုစိုက်မနေပဲ ခြေထောက်လေးတွေကိုပါ ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ခြေထောက်လေး ဖြူဖွေးနေစေဖို့ ပုံမှန် ကြေးချွတ်ပေးဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ကြေးချွတ်ခြင်းက […]
ကြီးပွား ချမ်းသာနိုင်မည့် အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြား… ကြီးပွားချမ်းသာနိုင်မည့်နှစ် ကဲပါဗျာ…အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အခက်အခဲနဲ့ ပူပင်သောကတွေ ရောက်နေတဲ့ သူတွေအတွက် …၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလန်းတွေ ပွင့်လန်းပြီး မိမိတို့အတွက် ကြီးပွားချမ်းသာစေနိုင့်မယ့် အသက်အပိုင်းအခြားလေးတွေကို ကြိုတင် တွက်ချက်ပြီး သိရှိကာ မလျှော့သောဇွဲလုံ့လတွေနဲ့ စိတ်ခွန်အားများ ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ …၊ ဆရာက မိတ်ဆွေတို့ အားလုံးအတွက် ကြီးပွားချမ်းသာ နိုင်မည့် လောကဓံ အကောင်းခွင်အသက်အပိုင်းတွေကို ကြိုတင် တွက်ချက်ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ တနင်္ဂနွေ […]
၀ဋ္ . . . တစ္လုံးတည္းပဲ ကိုယ့္အလွည့္ေရာက္လာတဲ့အခါ ေသမတတ္ နာက်င္ခံစားရပါတယ္
ဝဋ် . . . တစ်လုံးတည်းပဲ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်လာတဲ့အခါ သေမတတ် နာကျင်ခံစားရပါတယ် ဝဋ်ဆိုတာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ပြန်ပြီးခံရတတ်တယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာထက် ပိုပြီး နာကျင်ခံစားရလိမ့်မယ် လူတစ်ယောက် ဝဋ်လည်လာတဲ့အခါ ဘယ်သူကမှ ပြန်ပြီး သတိပေးစရာမလိုဘူး ကိုယ်ဘာကြောင့် ပြန်ပြီး ခံစားနေရလဲဆိုတာ သူ့အလိုလို ခေါင်းထဲမှာ သိတယ် ကိုယ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အရာအားလုံး ပြန်ပြီးတော့ ပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ် ဥပမာ – တစ်စုံတစ်ယောက်ကြောင့် ကိုယ့်မှာ သေလောက်အောင် […]
သင့္ရဲ႕ တစ္ေန႔တာမွာ ဖုန္း လံုးဝ မသံုးသင့္တဲ့ အခ်ိန္မ်ား
သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာမှာ ဖုန်း လုံးဝ မသုံးသင့်တဲ့ အချိန်များ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူတိုင်းနီးပါး အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တော့ ဖုန်းကို မလွှဲမရှောင်သာ အသုံးပြုနေကြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့ အခြေအနေကြီးမှာ ဖုန်းအသုံးပြုခြင်းက တစ်နေ့တာရဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေကို သိမ်းပိုက်ထားတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ဖုန်းအသုံးမပြုသင့်တဲ့ အချိန်တွေကို အခုလို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဒီလို ဖုန်းအသုံးမပြုဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်ခြင်းကနေ ရလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာပါနော်။ (၁) မနက် အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း လူအတော်များများကတော့ နိုးနိုးခြင်း ပုံမှန်လုပ်မြဲ […]
Valinetine’s day ပေါ်ပေါက်လာပုံ
Valinetine’s day ပေါ်ပေါက်လာပုံ ချော့ကလက်က ဘယ်ကပါလာတယ်တော့ မသိဘူး ဖေဖေါ်ဝါရီ တစ်ဆယ့်လေး ဆိုတာ စိန့် ဗယ်လင်ဒိုင်း ကြိုးမိန့်ပေးခံရတဲ့ နေ့လေးပါ အေဒီ (၃)ရာစု လောက်မှာ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ရိုမန်စစ်ဘုရင် Claudius ဟာ စစ်အင်အားတွေစုဆောင်းနယ်မြေသစ်တွေတိုးချဲ့ရင်း ပါဝါကြီးစိုးခဲ့တယ်..။သူ့လက်ထက်မှာ Britain နိုင်ငံဟာ ရောမအင်ပါယာအောက် ရောက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်..။ Claudius ဟာအမြဲတမ်း နယ်ချဲ့ရင်း စစ်ပွဲကိုပဲဦးစားပေးဆင်နွှဲနေတော့ နိုင်ငံထဲကယောကျာ်းတွေဟာ စစ်ထဲ မဝင်ချင်တော့ ဘူး။စစ်မတိုက်ချင်ကြတော့ဘူး..။ဇနီးမယားတွေ […]
“အိမ်ထောင်ပြု”ဆိုတဲ့ စကား (၃)လုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုသိစေချင်တယ်
ကျွန်တော်တို့ အိမ်ထောင်ကြပြီး မကြာခင် ဇနီးမောင်နှံ့ နှစ်ဦးသည် မိဘ နှစ်ပါးအားနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သွားရောက်၍ ကန်တော့ဖြစ်လေသည်။ ဒီလို ကန်တော့အပြီးမှာ ဖခင်ဖြစ်သူကအိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ခုလို ဆုံးမစကားပြောပါတယ်။ “သားနဲ့ သမီးတို့ အဖေပြောမဲ့ စကားလေးတွေကို အမြဲနှလုံးသွင်းထားပါနော်။ ဒီနေ့ကစပြီး သားတို့ သမီးတို့ဟာအိမ်ထောင်ရှင်တွေဖြစ်သွားကြပြီ။ ဒီတော့ အရင်လို လူပျို၊ အပျိုတွေလို နေလို့မရတော့ဘူး။ ” အိမ်ထောင်ပြု ” ခြင်းဆိုတဲ့ စကား ၃လုံးဟာ သူ့မှာ […]
February 8, 2022 sonsonlinlin 0
လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့အိပ်ခန်းထဲမှာမှန်တွေမရှိသင့်ပါဘူးအထူးသဖြင့်အိပ်ယာဟာမှန်ထဲမှာပေါ်နေရင်အဲဒီမှန်ချပ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ပါလင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ဟာမှန်ထဲထင်ဟပ်သောကြောင့်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှူများဖြစ်ပေါ်စေတက်ပါတယ် တယောက်ထဲအိပ်စက်သူများအနေနှင့်အိပ်ရာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာမှန်ကိုထားရှိတဲ့သူတွေဟာအိပ်စက်အနားယူတဲ့အခါအိပ်ယာထဲလှဲလျောင်းနေတဲ့ပုံရိပ်ထင်ဟပ်စေသောကြောင့်ကျန်းမာရေးချူချာနိုင်ပါတယ် မိမိအိမ်ခန်းထဲကမှန်အနေထားမှန်မမှန်ပြန်စစ်ဆေးပြီးမှန်ကိုနေရာရွှေ့တာဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုနဲ့ ဖုံးလွှမ်းတာမျိုးလုပ်ပါကစိတ်ရောကိုယ်ရောမိုခွန်အားပြည့်လန်းဆန်းစေတဲ့အိပ်စက်အနားယူမှုကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် မှန်တွေဟာသူတိုရှေ့ကမျက်နှာချင်းဆိုင်လာတဲ့အရာတိုင်းကိုပုံရိပ်ယောင်မိတ္တူပွားစေနိုင်တဲ့စွမ်းသတ္တိရှိတာကြောင့်မှန်ကိုအနေအထားမှန်အောင်ရှိသင့်တဲ့နေရာမရှိသင့်တဲ့နေရာထားတက်ဖိုလိုပါသည်သင့်ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာတွေကိုလည်းပွားများပံပိုးပေးနိုင်သလို သုံးစွဲတာမမှန်ကန်ခဲ့ရင်လည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ် မှန်တိုရဲ့ကောင်းကျိုးပြစ်တိုကိုရေးသားတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ဖုန်းရွှေပညာရပ်ကနေကောက်နုတ်တင်ပြခြင်းဖြစ်သည် ကံဆိုးစေတတ်တာကြောင့်လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့အိပ်ခန်းထဲမှာမှန်တွေမရှိသင့်ပါဘူး လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့အိပ်ခန်းထဲမှာမှန်တွေမရှိသင့်ပါဘူးအထူးသဖြင့်အိပ်ယာဟာမှန်ထဲမှာပေါ်နေရင်အဲဒီမှန်ချပ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ပါလင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ဟာမှန်ထဲထင်ဟပ်သောကြောင့်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှူများဖြစ်ပေါ်စေတက်ပါတယ် တယောက်ထဲအိပ်စက်သူများအနေနှင့်အိပ်ရာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာမှန်ကိုထားရှိတဲ့သူတွေဟာအိပ်စက်အနားယူတဲ့အခါအိပ်ယာထဲလှဲလျောင်းနေတဲ့ပုံရိပ်ထင်ဟပ်စေသောကြောင့်ကျန်းမာရေးချူချာနိုင်ပါတယ် မိမိအိမ်ခန်းထဲကမှန်အနေထားမှန်မမှန်ပြန်စစ်ဆေးပြီးမှန်ကိုနေရာရွှေ့တာဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုနဲ့ ဖုံးလွှမ်းတာမျိုးလုပ်ပါကစိတ်ရောကိုယ်ရောမိုခွန်အားပြည့်လန်းဆန်းစေတဲ့အိပ်စက်အနားယူမှုကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် မှန်တွေဟာသူတိုရှေ့ကမျက်နှာချင်းဆိုင်လာတဲ့အရာတိုင်းကိုပုံရိပ်ယောင်မိတ္တူပွားစေနိုင်တဲ့စွမ်းသတ္တိရှိတာကြောင့်မှန်ကိုအနေအထားမှန်အောင်ရှိသင့်တဲ့နေရာမရှိသင့်တဲ့နေရာထားတက်ဖိုလိုပါသည်သင့်ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာတွေကိုလည်းပွားများပံပိုးပေးနိုင်သလို သုံးစွဲတာမမှန်ကန်ခဲ့ရင်လည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ် မှန်တိုရဲ့ကောင်းကျိုးပြစ်တိုကိုရေးသားတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ဖုန်းရွှေပညာရပ်ကနေကောက်နုတ်တင်ပြခြင်းဖြစ်သည် Credit Zawgyi လင္မယားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အိပ္ခန္းထဲမွာမွန္ေတြမရွိသင့္ပါဘူးအထူးသျဖင့္အိပ္ယာဟာမွန္ထဲမွာေပၚေနရင္အဲဒီမွန္ခ်ပ္ကိုဖယ္ရွားပစ္ပါလင္မယားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ပုံရိပ္ဟာမွန္ထဲထင္ဟပ္ေသာေၾကာင့္အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႉမ်ားျဖစ္ေပၚေစတက္ပါတယ္ တေယာက္ထဲအိပ္စက္သူမ်ားအေနႏွင့္အိပ္ရာနဲ႔မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာမွန္ကိုထားရွိတဲ့သူေတြဟာအိပ္စက္အနားယူတဲ့အခါအိပ္ယာထဲလွဲေလ်ာင္းေနတဲ့ပုံရိပ္ထင္ဟပ္ေစေသာေၾကာင့္က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာႏိုင္ပါတယ္ မိမိအိမ္ခန္းထဲကမွန္အေနထားမွန္မမွန္ျပန္စစ္ေဆးၿပီးမွန္ကိုေနရာေ႐ႊ႕တာဒါမွမဟုတ္တစ္ခုခုနဲ႔ ဖုံးလႊမ္းတာမ်ိဳးလုပ္ပါကစိတ္ေရာကိုယ္ေရာမိုခြန္အားျပည့္လန္းဆန္းေစတဲ့အိပ္စက္အနားယူမႈကိုရရွိေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္ မွန္ေတြဟာသူတိုေရွ႕ကမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္လာတဲ့အရာတိုင္းကိုပုံရိပ္ေယာင္မိတၱဴပြားေစႏိုင္တဲ့စြမ္းသတၱိရွိတာေၾကာင့္မွန္ကိုအေနအထားမွန္ေအာင္ရွိသင့္တဲ့ေနရာမရွိသင့္တဲ့ေနရာထားတက္ဖိုလိုပါသည္သင့္ကိုေပ်ာ္႐ႊင္ေစတဲ့အရာေတြကိုလည္းပြားမ်ားပံပိုးေပးႏိုင္သလို သုံးစြဲတာမမွန္ကန္ခဲ့ရင္လည္းမေကာင္းတဲ့အက်ိဳးဆက္ေတြသက္ေရာက္ေစႏိုင္ပါတယ္ မွန္တိုရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးျပစ္တိုကိုေရးသားတင္ဆက္လိုက္ရပါတယ္ဖုန္းေ႐ႊပညာရပ္ကေနေကာက္ႏုတ္တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္ ကံဆိုးေစတတ္တာေၾကာင့္လင္မယားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အိပ္ခန္းထဲမွာမွန္ေတြမရွိသင့္ပါဘူး လင္မယားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အိပ္ခန္းထဲမွာမွန္ေတြမရွိသင့္ပါဘူးအထူးသျဖင့္အိပ္ယာဟာမွန္ထဲမွာေပၚေနရင္အဲဒီမွန္ခ်ပ္ကိုဖယ္ရွားပစ္ပါလင္မယားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ပုံရိပ္ဟာမွန္ထဲထင္ဟပ္ေသာေၾကာင့္အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႉမ်ားျဖစ္ေပၚေစတက္ပါတယ္ တေယာက္ထဲအိပ္စက္သူမ်ားအေနႏွင့္အိပ္ရာနဲ႔မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာမွန္ကိုထားရွိတဲ့သူေတြဟာအိပ္စက္အနားယူတဲ့အခါအိပ္ယာထဲလွဲေလ်ာင္းေနတဲ့ပုံရိပ္ထင္ဟပ္ေစေသာေၾကာင့္က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာႏိုင္ပါတယ္ မိမိအိမ္ခန္းထဲကမွန္အေနထားမွန္မမွန္ျပန္စစ္ေဆးၿပီးမွန္ကိုေနရာေ႐ႊ႕တာဒါမွမဟုတ္တစ္ခုခုနဲ႔ ဖုံးလႊမ္းတာမ်ိဳးလုပ္ပါကစိတ္ေရာကိုယ္ေရာမိုခြန္အားျပည့္လန္းဆန္းေစတဲ့အိပ္စက္အနားယူမႈကိုရရွိေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္ မွန္ေတြဟာသူတိုေရွ႕ကမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္လာတဲ့အရာတိုင္းကိုပုံရိပ္ေယာင္မိတၱဴပြားေစႏိုင္တဲ့စြမ္းသတၱိရွိတာေၾကာင့္မွန္ကိုအေနအထားမွန္ေအာင္ရွိသင့္တဲ့ေနရာမရွိသင့္တဲ့ေနရာထားတက္ဖိုလိုပါသည္သင့္ကိုေပ်ာ္႐ႊင္ေစတဲ့အရာေတြကိုလည္းပြားမ်ားပံပိုးေပးႏိုင္သလို သုံးစြဲတာမမွန္ကန္ခဲ့ရင္လည္းမေကာင္းတဲ့အက်ိဳးဆက္ေတြသက္ေရာက္ေစႏိုင္ပါတယ္ မွန္တိုရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးျပစ္တိုကိုေရးသားတင္ဆက္လိုက္ရပါတယ္ဖုန္းေ႐ႊပညာရပ္ကေနေကာက္ႏုတ္တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္ Credit
ပုံမှန်ဟောင်သော အသံမဟုတ်ပဲ စူးရှဆို့နစ်သောအသံများ၊ဆိုးဝါးသောအသံများတို့ဖြင့် နားမကြားသာအောင် အူလျက်ရှိသည်။ ထိုအရာသည် မကောင်းသော နိမိတ်ကိုပြနေခြင်းဖြစ်လေသည်။မြို့ရွာတို့၌ ဘေးဆိုး အန္တရာယ်ဆိုး ကပ်ဆိုး မကောင်းမှု့တို့ ကြီးစွာကျရောက်နိူင်ပြီးအသေအပျောက်များနိူင်ခြင်း၊မြို့ရွာတို့၌ကုသိုလ်တရားနည်းပါးလာ၍ ဖုတ်၊ပြိတ္တာ၊ဘီလူး၊တစ္ဆေ၊နာနာဘာဝတို့က ဝင်ရောက်လာကြခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့ ဝင်ရောက်လာကြသောအခါမကောင်းသောအရာများကို မြင်နိူင်စွမ်း အရှိဆုံးမှာ ခွေးများပင်ဖြစ်လေသည်။ နောက်တခုကား မြို့ရွာများကို စောင့်ရှောက်သောသမ္မာဒေဝနတ်ကောင်း နတ်မြတ်များမှလည်း ဘေးဆိုးတို့ကိုမကြုံရအေ ာင် ခွေးတို့မှတဆင့် သတိပေးစေသော အရာတို့လည်းရှိလေသည်။ ထို့သို့ ပုံမှန်မဟုတ်သောခွေးအူပါက ခွေးအူနေသောအချိန်တွင် လုပ် ဆေ ာင်ရမည့်အရာမှာ […]
ဒီလိုအချစ်မျိုးကို တစ်ခြားဘယ်သူစိမ်းဆီကများ ရနိူင်အုံးမှာတဲ့လဲ ?
ပီတိမျက်ရည်တွေနဲ့ ငိုပါရစေ ❣ သားတစ်ယောက်ဟာ မိဘတွေနေတဲ့ မွေးရပ်‌မြေ ‌တောရွာလေးကို အလည်ပြန်လာတယ် ။ဒါပေမဲ့ သူဟာ ခွင့်၂ ရက်ပဲရခဲ့လို့ တစ်ညတည်းအိပ်ပြီး နောက်‌နေ့မနက် ‌စောစော ၆ နာရီလောက် မြို့ကားအမှီ ထပြန်ရမှာပါ။ အဲ့ဒီည သားအမိနှစ်ယောက်သား ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ အလုပ်အကိုင်အ‌ကြောင်းတွေကို ထိုင်‌ပြောကြရင်း ညဉ့်တော်တော်နက်သွားတယ် ။ သွားမအိပ်ခင်လေးမှာ သားဖြစ်သူဟာ သူ့အမေကို နောင်တကြီးစွာနဲ့‌ ပြောတာက “အမေရယ်…. သား ဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာရတာ အရမ်းကို […]